Client Information Systems isiZulu
SARS Home > Client Segments > Individuals > I need help with my tax > Client Information Systems isiZulu
UHLELO LWEMINININGWANE YEKHASIMENDE (EYAZIWE NGOKUBHALISA KANYE)
Luyini Uhlelo Lwemininingwane Yekhasimende?
Indlela obhalisela ngayo intela kanye nemithekelo futhi uqondise kahle imininingwane yakho isiguqukile kusukela zili-12 kuNhlaba 2014. U-SARS manje usenendlela “Yokubhaliswa Kanye’ komkhokhintela ebhaliselwa yonke intela ayikhokhayo kanye nezikhungo ezisemthethweni axhumene nazo. Uma ukubheka ngeso lomkhokhintela, kusho ukuthi uzobhalisa kube kanye njengomkhokhintela omusha kuthi emva kawalokho-ke ude ugcwalisa ngemininingwane enqala uma usukhokha okunye isib. Intelantengo. Manje sekuzoba lula futhi ukuqondisa imininingwane yakho ekhona.
Yini ezokuba yingxenye Yohlelo Lwemininingwane Yekhasimende?
Uhlelo Lwemininingwane Yekhasimende(Ukubhaliswa Kanye) kuzoqalwa kufakwe, ngokuqala -:
Uhlelo olulula lokubhalisela:
INtelangeniso (kuhlanganisa neNtela Yesibambiso)
INtela Yezono neNtelamithekelo
Uhlelo Lwemininingwane Yekhasimende lunanzuzoni na?
Abakhokhintela/ Abameleli ababhalisiwe manje sebezokwazi uku-:
Ukubona zonke izinhlobo zentela abazibhalisele endaweni eyodwa.
Ukwengamela yonke imininingwane endaweni eyodwa ku- eFiling noma Egatsheni lakwa –SARS.
Ukubhalisela ezinye izinhlobo zentela (i-CIT, i-PAYE, i-VAT kushiya ngaphandle iNtela Yezono kanye neNtelamithekelo) ku- eFiling inqobo nje uma usuvele usuke wabhalisela noma eyodwa intela ku-eFiling.
Okokuqala ngqa, abakhokhintela noma izikhungo ezisemthethweni, njengeziNkampani kanye namaQomangcebo sebezokwazi ukuxhunyelelwa kummeleli wabo obhalisiwe kwabakwa-SARS. Ngeminye imininingwane cindenzela lapha.
Isu-Ngqangi: Qinisekisa ukuthi awukaze ubhaliswe, ngokusishayela kuqala ubuze e-Contact Centre yakwa-SARS ku-0800 00 SARS (7277).
Uma ubhalisa njengomkhokhintela omusha, udinga:
Ukuya Egatsheni lakwaSARS eliseduze nawe
Ukugcwalisa amafomu afanele okubhalisela intela:
INtela Yezono kanye Nentelamithekelo – DA185 kanye nezithasiselo
Abaqashi – EMP101e
INtela-Ngeniso yabaHwebi– IT77C
Intelangeniso yabantu– IT77
ntelangeniso yamaQomangcebo– IT77TRntelangeniso yamaQomangcebo– IT77TR
Abadayisi - VAT101
Qiniseka ukuthi uyakuphatha okudingekayo (ushicelelo olusekelayo). Uzobhaliswa futhi iphrofayili yakho izokwakhiwa ngaso leso sikhathi , inqobo nje uma kungenazinkinga.
Uzothola isaziso se-imeyili esiqinisekisa ukuthi ubhalisele uhlobo lwentela
Abakhokhintela abavele bethela:
Uma ungumkhokhintela ovele ekhona :
Ngena ku-eFiling uma ungumsebenzisi we-eFiling bese ugcwalisa ifomu lokubBhalisa, Ukuchibiyela nokuQinisekisa (RAV01) nokulapho ungaqinisekisa yonke imininingwane yakho ebhalisiwe ngaphandle kweGama kanye noNombolo kaMazisi/yokubhaliswa kwenkampani kanye negama lenkampani kanye nobunjalo besikhungo. Cindezela lapha ukuze uthole umhlahlandlela wokugcwalisa ifomu i-RAV01.
Uma udinga ukuqinisekisa le mininingwane kuzomele uye Egatsheni lakwa-SARS eliseduze nawe. Khumbula okuqingekayo (ushicilelo olusekelayo).
Iya egatsheni lakwaSARS eliseduze nawe.
Ngingayibhalisa noma ngiyiguqula kuphi imininingwane?
Kuncike kofuna ukukwenza, lezi zintuba ezilandelayo zizokuba khona:
Abameleli ababhalisiwe kufanele bahambele Igatsha lakwa-SARS kuqala, ukuze baqophe ubudlelwane nekhasimende labo ohlelweni lakwa-SARS. Ngeminye iminingwane, cindezela lapha.
Udinga ukudidiyela zonke izinhlobo zentela kwiphrofayili eyodwa? Bheka eminye imininingwane.
Akuseyukwamukelwa kubhaliswa kumbe ukuqinisekiswa kweminingwane okuthunyelwe ngeposi, ngebhokisi lakwa-SARS, ngesikhahlamezi noma nge-imeyili
Abaqashi bangabhalisa abasebenzi besebenzisa uhlelo Lokubhalisa kweNtelangeniso (ITREG). Abasebenzi bangabhaliswa nge- eFiling, kusetshenziswa i- [email protected]™ Yabaqasha kumbe egatsheni lakwa-SARS. Ngeminye imininingwane sebenzisa umhlahlandlela Wokubhalisa abasebenzi ngenhloso yeNtelangeniso.
Yini engenziwa ngubani?
Uzokwazi ukwenza lokhu okulandelayo, kuya ngomsebenzi wakho:
Qaphela: Isazi Sentela esingabhalisiwe sizkwazi kuphela ukwenza izinto ezimbalwa. Bheka eminye imininingwane ngezithiyo ezizosebenza.
Ezinye izinto ezidinga ukubhekwa futhi:
Ukujuba kube kanye – Ezimweni ezikhethekile isib? Amakhasimende angakwazi ukuzenzela, umuntu angaqokwa ukuba enze egameni lomkhokhintela kube kanye. Lo muntu oqokiwe kufanele abe nesayiniwe incwadi yegunya lokumela ukuze bacele ukusizwa njalo uma behambela igatsha.
Isu-Ngqangi: Umuntu ozokwenza izinto egameni lomkhokhintela kufanele abhaliswe nabakwa-SARS.
Ukujuba kube kanye kuzovunyelwa kuphela kulezi zimo ezikhethekile ezilandelayo
Umuntu ongakwazi ukuzenzela/ Obangwa nezibi
Ongeyena umhlali kuleli
Isazi sentela esiBhaliswe nabakwa-SARS
Uma uhlala kude negatsha lakwa-SARS ngokungoyibanga elingama-200KM. Uma ufuna ukubheka ibanga phakathi kwakho negatsha lakwa-SARS noma elingumahandlwana, Cindezela lapha.
Ukuphuculwa kwezinhlelo zezazi zentela ezibhalisiwe nabameleli ababhalisiwe ku-eFiling, funda okunye lapha.
Eminye imininingwane ngezinombolo ezintsha zesazi sentela funda okunye lapha.
Izazi Zentela Ezibhalisiwe zisalindeleke ukuba ziveze incwadi yegonya lokumela njalo uma zihambela igatsha kanjalo nephrofayili yabo kwi-eFiling ngeke iguquke.
Ingabe Isazi seNtela sakho sibhalisile? Sicela ukhumbule ukuthi zonke iZazi Zentela zidinga ukubhaliswa noMgwamanda Olawulayo (RCB) kanjalo nakubo abakwa-SARS. Thola ukuthi esakho Isazi Sentela sibhalisiwe na.
Lapho Isazi Sentela sishayela i-Contact Centre yakwa-SARS ucingo, kufanele ukuxhumana phakathi kweSazi nekhasimende laso kube sekukhona vele kwi-eFiling ngale kwalokho i-Call Centre angeke ikwazi ukumsiza. funda kabanzi.
Shayela i-Call Centre yakwa-SARS ku 080 00 SARS (7277) kumbe uhambele egatsheni lakwa-SARS eliseduze nawe. Qiniseka ukuthi uphatha okudingekayo.
Last Updated: 13/10/2016 1:58 PM ​